पर्यटन विकासमा होटलको महत्व: मन्त्री अधिकारी
१७ जेठ २०७५
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकमा पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने होटलको महत्व रहेको बताएका छन् । पर्यटकीयस्थल ठमेलमा स्थापना भएको ‘नेपाली घर’ नामक होटलको बुधबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले होटलले पाहुनालाई अत्याधुनिक सुविधाका साथै नेपाली जीवनशैली र परम्परासँग साक्षात्कार गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको… विस्तृत समाचार
निर्माण व्यवसायी महासंघको २० औं सधारणसभा असोज ५–६ मा
१६ जेठ २०७५
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २० औं सधारणसभा आगामी असोज ५ र ६ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । यही जेठ ११ गते सम्पन्न भएको महासंघको विशेष साधारण सभा तथा भेलाले यस्तो निर्णय गरेको हो । महासंघद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ नेतृत्व चयनगर्नका लागि महासंघको २० औं साधारण सभा आगामी असोज ५ र ६ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी अध्यक्ष अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले… विस्तृत समाचार
घरजग्गाको कारोबार निगरानीमा, इजाजत बिना कारोबार गर्न नपाइने
१५ जेठ २०७५
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै घरजग्गाको कारोबार नियमन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । बजेटमार्फत मन्त्री डा. खतिवडाले भूउपयोग सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था गर्ने, कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण गर्न नदिने । घरजग्गा बिक्री इजाजत लिएर मात्रै गर्न पाइने व्यवस्था गरेका जनाएका छन् । नयाँ बजेटमा घरजग्गाको कारोबारमाथि अंकुश लगाउने विश्वास बजेट अघि नै गरिएको थियो । प्लटिङ समेत प्रभावित हुने भएका छन् । विस्तृत समाचार
​साना किसानको सबै ऋण मिनाहा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै साना किसान बैंकमार्फत किसानहरुले लिएको ऋण मिनाहा दिने घोषणा गरेका छन् । माटोको गुणस्तर परिक्षण, बीऊको परिक्षणको व्यवस्था, रसायनिक मल, कृषी औजारको कारखाना स्थापना गरिने । मोबाईल मार्फत बजार सूचना दिइने । विस्तृत समाचार
​सुत्केरी महिलालाई एयर एम्बुलेन्सद्वारा उद्धार
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सुत्केरी तथा बिराामीको उद्धारको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा एक जेष्ठ नागरिक आश्रम सञ्चालन गर्ने । विस्तृत समाचार
​अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा संसदमा बजेट प्रस्तुत सुरु
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका छन् । आजै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठबाट बजेट पारित भएसँगै उनी संसद भवन पुगेर बजेट प्रस्तुत गर्न सुरु गरेका हुन् । बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका अघि संसदमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खतिवडाले बैदेशिक रोजगारीलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेका छन् । विस्तृत समाचार
११ जेठ २०७५
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले गुणस्तरहीन भएको आरोपमा बजारबाट तत्काल औषधी फिर्ता लिन सूचना जारी गरेपनि औषधी उत्पादक कम्पनीले भने त्यस्तो औषधी फिर्ता नलिने भन्दै विभागको निर्देशन अटेर गरिरहेको छ । विभागले गुणस्तरहीन भनेर सूचना जारी गरेको औषधी राजधानीसहित दशैभरिका औषधी पसलहरुमा शुक्रबार पनि बिक्री वितरण भइरहेको छ । विभागले मानिस गम्भिर विरामी हुँदा प्रयोग गर्ने एन्टिबायोटिक सिप–५०० (सिप्रोफ्लोजासिएन ट्यावलेट आईपी) नामक औषधी विभागको मापदण्ड… विस्तृत समाचार
पनौतीको विद्युत गृहलाई जलविद्युत अध्ययन केन्द्र बनाउने सहमति
१० जेठ २०७५
काठमाडौं । काभ्रेको खोपासीमा रहेको २.४ मेगावाट जडित क्षमताको पनौती जलविद्युत गृहलाई शैक्षिक ग्रामको रुपमा विकास गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच विद्युत गृहलाई शैक्षिक र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा प्रयोग तथा विकास गर्ने गरी समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको छ । धुलिखेलमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्राडा रामकण्ठ मकाजू श्रेष्ठले एमओयूमा हस्ताक्षर… विस्तृत समाचार
सम्भाव्यता अध्ययन भन्यो, काठमाडौंको चक्रपथभित्रै केवलकार बनाउन सकिन्छ
काठमाडौं । केन्द्रीय राजधानी उपत्यकामा केबलकार सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसका लागि कम्तिमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने इञ्जिनियरिङ अध्ययनले देखाएको छ । करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक सवारीको चाप घटाउने उपाय स्वरुप फ्रान्स सरकारको सहयोगमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनले काठमाडौंको चक्रपथभित्रै केबलकार सञ्चालन गर्न सम्भव भएको देखाएको राससको आजको बुलेटिनमा समाचार छ । केबलकार निर्माण, जडान र सञ्चालनमा विश्वमा प्रसिद्धि… विस्तृत समाचार
काठमाडौं । पाँचौ हिसान एडुफेयर २०१८ भोलिदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुने भएको छ । १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने ‘पाँचौं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर २०१८’ मा नेपालमै संचालित गुणस्तरीय र उत्कृष्ट शिक्षा दिने शिक्षालयहरूका वारेमा उचित जानकारी एवं परामर्श नहँुदा, कुन विषय किन पढ्ने, विषयको छनौट कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा नपाउनुका साथै कतिपय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको विदेश मोहका कारणले शिक्षा प्राप्तिकै लागि ठूलो धनराशी विदेशिएको वर्तमान… विस्तृत समाचार